Bravo ! well done , - Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: bravo ! well done , mr kynaston ! (Engels - Burmees)
သို့သော်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါ ခံရစဉ်အခါ၊ သင်တို့သည် ငါနှင့်ဆက်ဆံသောအားဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ပြုကြပြီ။
ထိုကြောင့် အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံသို့ အလျင်အမြန် စေလွှတ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ကြွလာသော အားဖြင့် ကောင်းမွန်စွာပြုပါ ပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင် သည် ကိုယ်တော်၌မှာထားတော်မူသမျှကို နားထောင် ခြင်းငှါ၊ ယခုအကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ အသင့်နေကြပါသည်ဟု ကော်နေလိ ပြောဆို၏။
အရှင်ကလည်၊ သာဓု၊ သစ္စာရှိသော ငယ်သားကောင်း။ သင်သည် အမှုငယ်၌သစ္စာစောင့်လေပြီ။ များ စွာသော အမှုအခွင့်ကို သင်၌ငါအပ်ပေးမည်။ သင်၏သခင်နှင့်အတူ စည်းစိမ်ကိုဝင်စားလော့ဟု မိန့်တော် မူ၏။
အရှင်က၊ သာဓု သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ သင်သည် အမှုငယ်၌သစ္စာစောင့်လေပြီ။ များစွာသော အမှုအခွင့်ကို သင်၌ ငါအပ်ပေးမည်။ သင်၏ သခင်နှင့်အတူ စည်းစိမ်ကိုဝင်စားလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
bertindak wajar (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))inglish (Engels>Tagalog)findings (Engels>Portugees)naligo kana ba (Tagalog>Engels)may tama na panahon para sa ganyan na bagay (Tagalog>Engels)seperti lintah menghisap darah (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))please love me back (Engels>Koreaans)nihil sine deo (Latijn>Italiaans)ano ang ibig sabihin ng paggaod (Tagalog>Engels)casae parvis lucernus ab agricolis illuminantur (Latijn>Italiaans)aaj sir ka birthday hai (Hindi>Engels)locked away (Engels>Tagalog)rela hati (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))gufa ko english me kya kehte haimilna (Hindi>Engels)mondadori (Italiaans>Pools)do you value our friendship (Engels>Tagalog)langgar (Maleis>Engels)greenwich (Engels>Tagalog)tipu helah francis light (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))српски (Servisch>Bulgaars)i have no response (Engels>Tagalog)oya koheda (Sinhala>Tamil)pihitan ng relo (Tagalog>Engels)hd bp video openn (Hindi>Engels)kasi ayaw kung madamay ka (Tagalog>Engels)